२ बजेको अपडेटः नेप्से ०.३५ प्रतिशतले घट्यो - Everest Dainik - News from Nepal
२ बजेको अपडेटः नेप्से ०.३५ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । बुधबार कारोबार भएको तेस्रो घण्टाको अवधिमा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३५ प्रतिशतले घटेको छ । यस समयमा ४ दशमलव ८८ अङ्कले घटेर १ हजार ३ सय ८९ दशमलव ९८ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घटेको हो ।
याे पनि पढ्नुस १ बजेको नेप्सेको अपडेटः परिसूचक १.५९ प्रतिशतले बढ्यो
कारोबार भएका १ सय ५६ कम्पनीको रू। ३६ करोड १४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेमा सर्वाधिक शेयर कारोबार हुनेमा नेपाल ग्रामीण विकास बैङ्क रहेको छ ।
सो बैङ्कको प्रतिकित्ता रू. ६ सय ६० मा रू. ३ करोड १५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेप्सेको सुरुवाती एकघण्टाको कारोबारमा दोहोरो अ‌ंकले वृद्धि